Aaron Ramsey oo heshiis la gaaray kooxdiisa cusub – Gool FM
Aaron Ramsey oo heshiis la gaaray kooxdiisa cusub
(Yurub) 10 Jan 2019. Juventus ayaa heshiis la gaartay khadka dhexe kooxda Arsenal iyo xulka qaranka weles ee Aaron Ramsey, si uu ugu biiro safka naadiga reer Talyaani ee lagu naaneyso Old Lady ama marwada duqda.
Shabakada caanka ah ee “Sky Sports” ayaa shaacisay in Juventus ay heshiis la gaartay Aaron Ramsey si uu u yimaado Allianz Stadium suuqa xagaaga ee soo aadan , kadib marka uu soo idlaado heshiiskiisa kooxda Arsenal ama suuqa haatan furan ee Janaayo.
Wargeyska Talyaaniga ah ee “Calcio Mercato” ayaa dhankiisa shaaca ka qaaday in wakiilka Aaron Ramsey uu gaari doono magaalada Turin kulanka ay kooxaha Juventus iyo Milan ku wada ciyaari doonaan Italian Super cup 16-ka bishan Janaayo, si loo go’aamiyo heshiiska iyo xiliga uu mari doono tijaabada caafimaadka
ka mid noqon doono Turin ka dib kulankii Super Mario ee Juventus iyo AC Milan, si uu u saxiixo qandaraaska, islamarkaana loo go’aamiyo taariikhda uu mari doono baaritaanka caafimaad .
Ciyaaryahanka ayaa la filayaa inuu helo mushaar sanadle ah ee gaarsiisan € 6.5 milyan iyo € 1.5 million ee ah lacagaha gunnada.
Wali lama cadeynin suurtagalnimada uu Aaron Ramsey ugu biiri karo kooxda Juventus bishan Janaayo, balse waxay arinta ku xirnaan doontaa Arsenal oo ciyaaryahankeedan ku dooneysa 20 ilaa 25 milyan euro.
Laakiin Juventus ayaa diyaar u ah inay bixiso 9 illaa iyo 10 milyan euro, si ay uga dhaadhiciso kooxda reer London ee Gunners in ciyaaryahanka uu u soo dhaqaaqo Allianz Stadium suuqa xilliga qaboobaha.
Antonio Conte oo tallaabo u qaadaya sidii uu xiddig horay ugu soo ciyaaray Barcelona dib ugu soo celin lahaa Serie A-da.